WAR SHIINOOW XAGGEE KU SOCOTAAN: Shiinaha oo mushaar Khiyaali ah u soo bandhigay Aubameyang – Gool FM
(Beijing), 04 Jan 2017 –Pierre-Emerick Aubameyang oo Weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Jarmalka ayaa noqonaya laacibkii ugu dambeeyey ee dalab uga yimaado dhinaca Horyaalka lacagta suuqa ku waalay ee Shiinaha, waxaana haddii uu aqbalo heshiiskan uu noqonayaa laacibka ugu qaalisan Caalamka.
Wargeyska ‘Gazzetta dello Sport’ ee ka soo baxa Talyaaniga ayaa shaaciyay in 27 sano jirka Borussia uu codsi 150 Milyan oo Euro ah kaga yimid kooxda Shanghai SIPG, waxaana intaa dheer in mushaar ahaan u ballan qaadeen 41 Milyan oo Euro sanadkii.
Aubameyang ayaa dhaliyay 22 gool 21 kulan oo uu Dortmund u dheelay xilli ciyaareedkan, waxaana haatan uu isu diyaarinayaa sidii uu xulkiisa Gabon ugala qayb geli lahaa Koobka Afrika ee lagu qabanayo isla dalkiisa.
Toddobaadyadii la soo dhaafay Oscar, Carlos Tevez iyo Axel Witsel ayay ahaayeen ciyaartoydii ugu dambeysay ee ay iibsadeen kooxaha suuqa kala iibsiga gil gilay ee Shiinaha.
MAD: Reports that Shanghai SIPG have made a €150 Million bid for Pierre-Emerick Aubameyang with a €41 Million a year contract. 😳💰 pic.twitter.com/Md0SSN6rvA
— SPORF (@Sporf) January 4, 2017
Adebayor oo isagoo 6 bilood koox la'aan ah loo soo xushay xulka Qaranka Togo ee K/Qarammada Afrika
West Ham oo ku guulaysatay racfaankii ay ka qaadatay casaankii lootaagay Feghouli kulankii Man United